अनलाइन लभ | Shresthakedar's Blog
2012 -जनकराज भट्ट- “कसको हो ?” “कहाँबाट आयो ?” “कोसँग डेटिङ थियो ?”, अनलाइन लभ साभार:- mysansar, February 4th
अप्रील 30, 2012
साभार:- mysansar, February 4th, 2012
– “कसको हो ?”
“कहाँबाट आयो ?”
“कोसँग डेटिङ थियो ?”
एकाबिहानै कोटको देब्रेपट्टी बाहुलामा लामो केश भेटिएपछि चिच्याउँदै थिइन् उनकी श्रीमती। त्यसै पनि बिहानैदेखि उनको मूड खराब थियो। चार दिन लाइन बसेर पनि ग्याँस नपाएको झर्कोलाई यो केशले झन् जटिल ‘केस’ बनाइदिएको थियो। पहिले त उसले हाँसेरै उडाउन खोज्यो। त्यसपछि रिसाएर पन्छाउने कोशिश गर्‍यो। तर अहँ, सम्झाउन सकेन। काठमान्डुमा माइक्रो नामको डब्बा चढेर हिंड्नेको जिउमा अर्काको ‘बिग’ नै झरेर अड्के त थाहा हुन्न, कपाल कहाँबाट आयो भन्नु अब। दुई चार दिनलाई निहुँ खोज्ने मेलो पुग्यो, उसले सोच्यो।
आज घरमा भात खान नपाउने छाँट देखियो। यसैगरी साना झगडाले कति जागिरेहरु भात नचेपी अफिस जाँदा हुन्, भोकै गए नि के फरक पर्छ र, टन्न हुने गरी हाकिमको उपदेश र गाली त फ्रीमा खान पाइहालिन्छ नि। ऊ निरुत्तर फुत्त घरबाट बाहिर निस्क्यो अफिस जान र माइक्रोबस चढ्ने ठाउँमा उभियो अल्छि मानेर आङ तन्काउँदै। बिहानको घाम लागेर मौसम न्यानो थियो। दुई वटा माइक्रो आइसक्यो, चढ्न सकिने होइन। काठमान्डुमा गुड्ने यी स्याना कदका मोटर साह्रै लचकदार हुन्छन्, जति पनि मान्छे अटाउने। तेस्रो माइक्रोमा ऊ बल्जफ्ती झुन्डियो र ढोकानिर ढाड कुप्र्याएर उभियो।
“ओ दाइ, खुट्टा सिधा गर्नु त!” खलासी चिच्यायो। यो खलासी भन्ने जिनिस यस्तै हुन्छ, ढाड बाङ्गिएको देख्दैन, खुट्टा सिधा देख्छ। बनाउने कम्पनीले पनि नसोचेको संख्यामा मान्छे कोचेर माइक्रो घस्रिन थाल्यो। अलिक अगाडि गएपछि एक जना मान्छे झर्‍यो। अब बल्ल एक छिन कुप्रिएको ढाड सिधा पार्दा ठीक्क भैगो। अनि दाँयापट्टी हेर्न भ्यायो। बिहान बिहानै बडी स्प्रे हर्र बास्ना आयो। बिहानै के सारो नक्कल पार्न सकेका, उसले हेर्दै नहेरी सोच्यो।
“ए, तिमी पो!?!? ला सरप्राइज प्लान गरेथेँ मैले!” ऊ छक्क पर्‍यो, सबैभन्दा ठूलो सरप्राइज त उसले उनलाई चिनेकै छैन, त्यसमाथि पनि के सरप्राइज भन्छिन् यिनी।
“के सरप्राइज र?” उसका मुखबाट बल्जफ्ती निस्के।
“म हिजै मात्र काठमान्डु ल्यान्ड गरेको, भर्जिनियाबाट। तिम्लाई च्याटमा नभनी आएर सरप्राइज दिम् भनेको, तिम्ले देखिहाल्यौ। मलाई देख्दा पनि तिमी चाँही कस्तो कोल्ड के? खुसी छैनौँ है ?!?”
ए हत्ते, अब चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग हट कसरी हुनु त ए कोल्ड नभएर। ह्या, तपाईंलाई म चिन्दिन भन्देर बाटो लागुँ जस्तो लागेको थ्यो उसलाई। तर भनेन, चिनेको साथी पो हो कि भनेर। अम्रिका गएसि मान्छे फेरिन्छ, न सानोमा स्कूलकलेजतिर सँगै पढ्ने कुनै रुन्ची भुन्टी हो कि। हेरुम् न के भन्दिरैछे, मुड फ्रेस गरुम् अफिस पुग्नुअघि- उसले सोच्यो।
“अनि भनेर आउनु पर्थ्यो नि त, म एअरपोर्ट लिन आउँथे नि” उसले सहज हुने प्रयास गर्‍यो।
“ठीकै छ, फ्लाइट लेट थ्यो, त्यही भएर! सुनाऊ न। तिमी अझै पनि नचिनेको मान्छेजस्तो पो बोल्छौ त। म चाँही तिमी भनेर वहाँदेखि आएँ, के भो क्या ? खुशी छैनौ तिमी ? कम अन, गिभ मि अ हग स्विट्स!”
ए आपत, उस्लाई फसाद पर्‍यो। गाडीमा वरीपरी बस्नेहरु ट्वाल्ल परेर उसलाई हेरिरहेका थिए। न गाडीमा सबैको अगाडि “हग” भनेर अर्काकी गर्लफ्रेन्डलाई अङ्गालो हाल्नु, कोही चिनेकाले घरमा खबर पुर्‍याइदियो भने त बिहान भातमात्रै भेटिएको थिएन, साँझ त बासै पाइन्न। उसले सोच्दै थियो, ऊ फेरि चिच्याई।
“आरन्ट यु कम्फर्टेबल विथ मी, टेल मि इफ यु ह्याभ सेकेन्ड थट्स!” उसले यसो विचार गर्‍यो, गाडीमा कोही चिनेको मान्छे रैछ भने बिजोग हुन्छ। किनकी यो त चिच्याउन छोड्दिन। उसलाई एक मन त सबै कुरा भनेर “भाँड मे जा” भन्दिम् जस्तो लागेको थ्यो, तैपनि एक्छिन रमिता हेर्ने लालसाले उसले भन्यो “काल्म डाउन, कहाँ यति मान्छेको अगाडि हग गर्नु त अनि? लेट्स गेट अफ एन्ड गेट इन्टु अ रेस्टुरेन्ट, ह्याभ मच् टु टक !” “यु आर बिहेभिङ स्ट्रेन्ज, ओके लेट्स अफ!” उसले भाडा तिर्‍यो, “कार्ड छ” भन्दै। अनि मान्छेहरुलाई पन्छाउँदै उनीहरु गाडीबाट उत्रे। * * * * * * * *
छेवैमा रहेको क्वालिटी रेस्टुरेन्टमा छिर्दा उसले थाहा पायो, केटी मोडर्न ड्रेसमा रैछे, अरुले ट्वाँ परेर हेर्दैथे। केटीले उस्लाई अङ्गालो हाली “आइ मिस्ड यू सो मच्!” भनेर।
उसले धेरै समयपछि परस्त्रीसँग अङ्गालो मारेको, छुट्टै आनन्द अनुभव भयो उसलाई। तर मान्छेहरुले हेरिराखेको देखेर उसले उनलाई छुट्ट्यायो “पिपल आर स्टिएरिङ्ग एट अस” भन्दै।
“यु युज्ड टु बि रोमान्टिक, बट यु ह्याभ टर्न्ड कोल्ड!” उसँग उत्तर थिएन । मेरी जस्ती बूढीको श्रीमान् भाको भए तँ नि कोल्ड हुन्थिस्। उसले मनमनै सोच्यो। “अनि कहाँ ठाउँ न कुठाउ रोमान्टिक हुनु त ?” उस्ले अझै सहज हुने कोशिश गर्‍यो। “अनि मलाई के ल्याइदियौ त ?”
“म आएँ त, अरु के चाहियो?” उनको प्रतिप्रश्नमा लाडेपना थियो । उस्ले सोच्यो, कत्ति न आफूलाई सेलेना गोमेज ठान्छे कि क्या हो ? “त्यो त हो, अनि अरु सुनाऊ न कस्तो चल्दैछ।” उसको मुखबाट फुत्किहाले, ज्या के भनें भन्ठान्दै।
“तिमी किन आज फर्मल भैराछौ क्या ? यु ह्याभेन्ट किस्ड मि टिल नाउ!” ऊ फेरि पहिले कै च्यानलमा फर्की। उस्लाई आपत, नचिनेकीलाई किसै त के गरिहाल्नु। “एम स्टिल स्टन्न्ड बाइ द वे!” उस्ले कुरा अन्तै मोड्ने प्रयास गर्‍यो। उनले एक झोकमा दुईवटा टुबोर्ग बियर, एउटा बफ चिल्ली र मम अर्डर गरिन, घराँ बुढीले स्वस्थानीको ब्रत बस्ने भएर चिकेन पनि खान दिन्न, ह्याँ यल्लाई ब्यानब्यानै बियर र राँगा मासु चाहिने।
“तिमी धेरै सोच्ने भएछौ, केही समस्या छ र?” उनले सोधिन्। उसलाई आपत। समस्यै समस्या छ, तँलाई चिनेको छैन, किचेनमा ग्याँस छैन, बाइकमा पेट्रोल नभएर माइक्रोमा झुन्डेर अफिस जानुपर्छ,घराँ बुढी रिसाएर बम छे, अफिसाँ हाकिमले रातो लगाइसक्यो होला हाजिर कापीमा, यो भन्दा के समस्या हुनु भन्दिम जस्तो लागेको थ्यो उसलाई। उल्ले यत्ति भन्न भ्यायो “तिमी साह्रै राम्री भैछौ।” यी शब्द कहाँबाट निस्के उसलाई पत्तो छैन। राम्री भन्दिम् जस्तो लागेको अलिक बढी नै भनिएछ कि क्या हो ? उस्ले सोच्यो। उसको हावा तिरले काम गर्‍यो। ऊ मुसुक्क मुस्काई।
अर्काकी गर्लफ्रेन्ड भए नि राम्री छे है। उल्ले अप्ठेरो मान्दै बियर तन्कायो। चिसो बियरले घाँटी भिजायो। पेट भोकले रनन थ्यो, आज लाग्ने भो खाली पेटमा उस्ले सोच्यो। बफ चिल्ली आइपुग्यो, उसले टोक्न मात्र आँटेको थ्यो, उनले भनिन्, “अनि भन तिम्री श्रीमतीको खबर के छ नि ?” ऊ झसङ्ग भयो । यल्लाई मेरो श्रीमती छ भन्ने कसरी थाहा भो, लौन जासुस पो हो कि क्या हो श्रीमतिले पठाको, हो रेछ भने आज खत्तम भन्ने सोच्दै उसले भन्यो “ठिकै छे किन र?”
“अस्ति मैले तिमीसँग स्काइपमा कुरा गर्दा मेरा बुढाले डाउट हानेका थे नि त, अनि मैले तिमी म्यारिड हो भन्दें।” उनले बफ चिल्लीको छोक्रा अड्केको दाँत फिस्स देखाइन्, उसलाई बसिनसक्नु भो। ए बाबा, अब यसको बूढो कहाँबाट निस्क्यो फेरि? हे प्रभु बचाउ मलाई, उसले। जुरुक्क उठेर यसले “मै तेरी बच्चेकी माँ बन्ने वाली हुँ” टाइपको डाइलग दियो भने ? यल्ले त के बेर र। लौ खत्तम !
“मैले अनलाइन चिनेकोमध्ये त सबसे हेन्सम तिमी नै लाग्छ के मलाई त। आँखा राम्रा छन तिम्रा।” उनी उता के-के फलाक्दै थिइन्, यता उसका दिमाग तिरिमिरी भए। अफिसाँ फेसबुक ब्लक गर्‍या १ वर्ष भो। घराँ बत्ती आए पो नेट चलाऊनु, मोबाइल घर पुगेसी केटाकेटीले गेम खेलेर दिक्क लाउँछन्। होइन, आँखासमेत हेर्ने गरी कहाँबाट चिनी क्या यल्ले मलाई। फेरि झल्याँस्स भो, ज्या है मै पो अर्काकी गर्लफ्रेन्डसँग आको त गाँठे।
“ए, अनि तिमी एक्लै आको ? तिम्रो श्रीमान् खोइ त ?” उसले अलिक बिषयमा प्रवेश गर्न खोज्यो। “हरे तिमीले बिर्सेको ? ऊ कहाँ मेरो अथोराइज्ड् हस्बेन्ड हो त । हामी त लिभ इनमा हो नि। उता गाको बेलामा ऊ हुन्छ यता तिमी। आइ एम कम्फर्टेबल विथ बोथ अफ यु गाइज। आइ वान्ट टु बि अ फ्री बर्ड।” उता उनले जानेको जति अङ्ग्रेजी बोलेर सकिन्, यता यस्को हंसले ठाउँ छोड्यो। बियरको नशा त गायब। अब कसरी भाग्ने, यल्ले घरमा आउने या फोन गर्ने या पछि लागी भने त मेरी बुढीले पुलिस लाउँछे। उसलाई एउटा जुक्ति फुर्‍यो। “एम गोइङ रेस्टरुम है, प्लिज क्यारी अन” भनेर ऊ निस्क्यो र ट्वाइलेट्को पछाडिपट्टिको भागबाट बरान्डा हुँदै सडकमा हाम्फाल्यो।
बाहिर निस्केर उसले एउटा सूर्य चुरोट सल्कायो र घर जाने निर्णय गर्‍यो। धन्न अनलाइन पुस्ता, धन्न लभ। चिन्नु न जान्नुको मान्छेसँग कम्फर्टेबल, हरे शिव सोच्दै घर आइपुग्यो। बिहान कोटमा रौँ भेट्दा उफ्रिने स्वास्नीले जासुस बनाएर पठाएकी रैछे भने त आज दह्रो भेटिन्छ भन्ठान्दै उस्ले डोरबेल थिच्यो। “अलिक तान्नु न ढोका खुल्लै छ, किन तपाईं चाँडै आउनुभा? सञ्चै त छ?” भन्दै उसकी बुढी निधार छाम्न आइपुगी। “एक्कासी यो खुशी किन नि ? बिहान त मलाई झन्डै खाउँला झै थियो त अनुहार?” उसले सोध्यो। “ग्याँस पाइयो नि त, अब एक महिनालाई आनन्द, एक महिनामा त आउला नि है।” बुढी दङ्ग छे, उसलाई छुट्ट्याउन गाह्रो भो, बुढा घर आएर भन्दा ग्यास पाएर बुढीहरु खुशी हुने जमाना आएछ।
उसले मनमनै सोच्यो, “यस्ता कुलङ्गार देशमा बसेर पनि अझै आसाबादी हुनु पागलपन हो। तँ रिसाएकी छैनस् भन्ने थाहा भाको भए त त्यो बियर सकेर आउँथे नि थुइक्क ।” अनि मुस्कायो। 🙂
[जनकको आफ्नै ब्लग जनक एप्रोचमा पहिलो पटक प्रकाशित]
« मागी मागी छोराऽऽऽ बे